आज कति छ बिदेशी मुद्राको विदेशी विनिमयदर ? हेर्नुहोस् ! – Life Nepali
आज कति छ बिदेशी मुद्राको विदेशी विनिमयदर ? हेर्नुहोस् !
दिनार, ओमानी रियाल र काेरियन वनको भाउ बढ्यो, अरु विदेशी मुद्रा स्थिर काठमाण्डौ – सोमबार कुवेती र बहराइन दिनारका साथै ओमानी रियाल र काेरियन वनको भाउ बढेको छ । अरु मुद्राको भाउ भने आइतबारको जस्तै छ । सोमबार नेपाल राष्ट्र बैंकले १ अमेरिकी डलरको खरिददर ११४ रुपैयाँ ५६ पैसा र बिक्रीदर ११५ रुपैयाँ १६ पैसा तोकेको छ । हिजो पनि खरिददर ११४ रुपैयाँ ५६ पैसा र बिक्रीदर ११५ रुपैयाँ १६ पैसा नै थियो ।
साउदी रियाल एकको खरिददर ३० रुपैयाँ ५५ पैसा र बिक्रीदर ३० रुपैयाँ ७१ पैसा रहेको छ । हिजो पनि खरिददर ३० रुपैयाँ ५५ पैसा र बिक्रीदर ३० रुपैयाँ ७१ पैसा रहेको थियो । आज सोमबार कतारी रियाल १ को खरिददर ३१ रुपैयाँ ४६ पैसा र बिक्रीदर ३१ रुपैयाँ ६३ पैसा रहेको छ । हिजो खरिददर ३१ रुपैयाँ ४६ पैसा र बिक्रीदर ३१ रुपैयाँ ६३ पैसा रहेको थियो ।
ओमानी रियाल १ को खरिददर २९७ रुपैयाँ ९६ पैसा रहेको छ । हिजो खरिददर २९७ रुपैयाँ ८५ पैसा रहेको थियो । यूएई दिर्हाम १ को खरिददर ३१ रुपैयाँ १९ पैसा र बिक्रीदर ३१ रुपैयाँ ३५ पैसा छ । हिजो पनि खरिददर ३१ रुपैयाँ १९ पैसा र बिक्रीदर ३१ रुपैयाँ ३५ पैसा नै रहेको थियो । मलेसियन रिंगिट एकको खरिददर २७ रुपैयाँ ५८ पैसा र बिक्रीदर २७ रुपैयाँ ७३ पैसा तोकेको छ । हिजो पनि खरिददर २७ रुपैयाँ ५८ पैसा र बिक्रीदर २७ रुपैयाँ ७३ पैसा थियो ।
काेरियन वन १ सयको खरिददर ९ रुपैयाँ ८४ पैसा र बिक्रीदर ९ रुपैयाँ ९० पैसा रहेकाे छ । हिजाे खरिददर ९ रुपैयाँ ८२ पैसा र बिक्रीदर ९ रुपैयाँ ८८ पैसा रहेकाे थियाे । सोमबार कुवेती र बहराइन दिनारको भाउ भने केही बढेको छ । कुवेती दिनार १ को खरिददर ३७७ रुपैयाँ २० पैसा र बिक्रीदर ३७९ रुपैयाँ १८ पैसा रहेको छ । हिजो खरिददर ३७७ रुपैयाँ १४ पैसा र बिक्रीदर ३७९ रुपैयाँ ११ पैसा रहेको थियो । बहराइन दिनार १ को खरिददर ३०३ रुपैयाँ ८६ पैसा र बिक्रीदर ३०५ रुपैयाँ ४५ पैसा तोकेको छ । हिजो खरिददर ३०३ रुपैयाँ ८२ पैसा र बिक्रीदर ३०५ रुपैयाँ ४१ पैसा रहेको थियो ।
Previous मंसिर लागे संगै सुनको मूल्य घट्यो !
Next बढ्यो दुबई कतार साउदी मलेसिय,अमेरिकी डलरसहित सबै देशको विनिमयदर !
38 mins ago Life Nepali